Chisingakundiki Chinovhara, Indelible Ink, Coding Printer - AoBoZi
Yedu kambani ndeye yepamusoro-tech kambani inoshanda muR & D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi inoenderana yekudhinda zvinoshandiswa.
Seimwe ISO9001 uye ISO14001 yakasimbiswa mugadziri, yedu inki kugadzikana ndiyo yakanakisa muChina, inozivikanwa nevatengi uye vakwikwidzi muChina.
Kuitira kuona mhando uye basa, isu tanga tichitarisa mukugadzira maitiro. Tine rumbidzo yepamusoro nemumwe.
Tine fekitori redu pachedu uye zvakare tine mafekitori mazhinji akavimbika uye anoshanda zvakanaka mumunda. Kuomerera kune "mhando yekutanga, mutengi kutanga.
Pretreatment Liquid Sublimation Heat Kutamisa C ...
30ml Bhodhoro Girazi Smooth Kunyora Tsime Pen ...
TIJ2.5 Bulk Ink Systems CISS Tank ine 1/2/4/6 ...
Makore gumi nemashanu
Zvikamu zvitanhatu zvikuru
Anopfuura makore gumi nemashanu echiitiko
Fujian AoBoZi Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2005 muFujian, China, Kambani yedu ikambani yepamusorosoro inoshanda muR & D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi yezvinodikanwa zvinoshandiswa kudhinda. Isu tiri vekutanga kugadzira uye nyanzvi mutungamiri mumunda weEpson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Mukoma, uye nezvimwe zvakakurumbira mhando mune dzakasiyana siyana.
Zvese zvigadzirwa zvatinotengesa zvinozivikanwa
Kutengesa vhoriyamu kunoiswa
Ndapota taura nesu zvino
Fujian AoBoZi Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2007. Kambani yedu ndeye yepamusoro-tech kambani inoshanda muR & D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi inoenderana yekutsikisa zvinoshandiswa.
Chikwata chedu chakazvipira mukuvandudza, uye kuvhenekerwa uye kusanganiswa neyakajairidzwa tsika uye hunoshamisa huchenjeri nefilosofi, isu tinopa kumusika kudiwa kwemhando yepamusoro-zvigadzirwa, kuita zvigadzirwa zvehunyanzvi.
Kwemakore mazhinji, isu takanamatira kune musimboti wevatengi wakanangana, mhando yakavakirwa, kugona kwazvo kutsvaga, kuwirirana kubatsirana kugovana.